Inguqulelo entsha yeLinux Mint 20.2 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeLinux Mint 20.2 sele ikhutshiwe
Ubumnyama | | Linux mint
Emva kweenyanga ezimbalwa zophuhliso ukumiliselwa kwe Inguqulelo entsha yosasazo oludumileyo lweLinux «Linux i-20.2"Uphuhliso luyaqhubeka ngesiseko se" Ubuntu 20.04 LTS ".
Kwaye kule nguqulo intsha ibonisiweyo yeLinux Mint 20.2 enye yeenoveli zayo eziphambili kukuba kuyo Inguqulelo entsha yeCinnamon 5.0 yendawo yedesktop ifakiwe, Inguqulelo ekhutshwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye kuyilo kunye nombutho womsebenzi wazisa icandelo lokulandela ukusetyenziswa kwememori.
Ngaphandle koko Useto lubonelelwe ukumisela ukusetyenziswa kwememori okuphezulu kuvunyelwe zizinto Ukusuka kwidesktop kunye nokuseta ithuba lokujonga imeko yememori. Xa lo mda ugqithile, iinkqubo zangasemva zeCinnamon ziqala ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuphulukana neseshoni kunye nokugcina usetyenziso luvulekile.
Kule nguqulo intsha yeLinux Mint 20.2, indlela yokuqala iscreen esenziwe ngokutsha-Endaweni yokusebenza rhoqo ngasemva, inkqubo yogcino lwekhusi ngoku iqala kuphela xa kukho imfuneko xa kuvulwa isikrini. Utshintsho lwenze ukuba sikwazi ukukhulula ama-megabytes angama-20 e-RAM. Ukongeza, iscreen sokugcina isikrini ngoku sivula iwindow yokonga eyongezelelweyo kwinkqubo eyahlukileyo ekuvumela ukuba uthintele ukuvuza kokungena kunye nokuqhekezwa kweseshoni nokuba iscreen sever asiphumeleli.
Kumlawuli wefayile, UNemo wongeze amandla okukhangela umxholo wefayilekubandakanya indibaniselwano yokukhangela umxholo kunye nefayile yokukhangela kunye nakwimowudi yephaneli ezimbini, i-hotkey ye-F6 iyenziwa ukuze kutshintshwe iipaneli ngokukhawuleza.
El Umphathi wohlaziyo ukwaxhasa ukufakwa ngokuzenzekelayo kohlaziyo lweziqholo kunye neephakeji kwifomathi yePlppak, ukongeza kwi yenziwe yanamhlanje ukunyanzela ukuba iphakheji yokuhambisa igcinwe ihlaziyiwe. Uphononongo lubonise ukuba kuphela malunga ne-30% yabasebenzisi abafaka uhlaziyo ngexesha elifanelekileyo, ngaphantsi kweveki emva kokuba bepapashiwe. Ukongezwa kweemetrikhi kusasazo ukuvavanya ukubaluleka kweephakeji kwinkqubo, njengenani leentsuku okoko kwagqityelwa ukuhlaziywa.
Ngokuzenzekelayo, umphathi wohlaziyo uya kubonisa isikhumbuzi ukuba uhlaziyo luyafumaneka ngaphezulu kweentsuku ezili-15 zekhalenda okanye iintsuku ezisi-7 zokusebenza kwinkqubo. Kernel kunye nokuhlaziywa komngcipheko kuphela kubalwa. Emva kokufaka uhlaziyo, umboniso wezaziso ukhubazekile kangangeentsuku ezingama-30, kwaye xa isaziso sivaliwe, isilumkiso esilandelayo siya kuboniswa emva kweentsuku ezimbini. Ungasicima isikrini kwisilumkiso okanye utshintshe iikhrayitheriya zokubonisa izikhumbuzo.
Olunye utshintsho olukhulu olubonakalayo kwiLinux Mint 20.2 yile IWarpinator iphuculwe ukuze kutshintshwe iifayile phakathi kweekhompyuter ezimbini kwinethiwekhi yendawo, ukususela ngoku yongeze amandla okukhetha ujongano lwenethiwekhi ukumisela ukuba yeyiphi na inethiwekhi yokubonelela ngeefayile, kunye nokumiliselwa konikezelo lwedatha ecinezelweyo. Isicelo seselfowuni siphuhlisiwe esivumela ukutshintshiselana kweefayile ngezixhobo ezisekwe kwiqonga le-Android.
Kwelinye icala, uphuculo oluqhubekayo kwizicelo eziphuhliswe njengenxalenye ye-X-Apps inyathelo, ejolise ekumanyaniseni imeko yesoftware kuhlelo lweLinux Mint esekwe kwiidesktops ezahlukeneyo, kuyakhankanywa. I-Xviewer ngoku inako ukumisa isikhashana kwisilayidi cngesithuba kwaye yongeza inkxaso kwifomathi ye-.svgz, ukongeza kuloo mbonisi woxwebhu, ukubonakaliswa kwezichazi kwiifayile zePDF kunikezelwe ngezantsi kwesicatshulwa kwaye ukubanakho ukuskrolela uxwebhu kongezwa ngokucinezela ibha yendawo, bona zongezwe iinketho ezintsha zokuqaqambisa izithuba kumhleli wokubhaliweyo kunye nemowudi ye-incognito yongezwa kumphathi wesicelo sewebhu.
Okokugqibela, inkxaso ephuculweyo yabashicileli kunye nezikena nayo imile. Iphakheji ye-HPLIP ihlaziyiwe yenguqulo 3.21.2 kunye neepp-usb kunye ne-sane-airscan package ezihlaziyiweyo zafakwa.
Fumana iLinux Mint 20.2
Kulabo banomdla wokufumana le nguqulo intsha, banokwenza njalo ukusukela iwebhusayithi yayo esemthethweni, ikhonkco yile. Kuya kufuneka uyazi ukuba iLinux Mint ibonelelwa ngendawo ye-MATE 1.24 enobunzima be-2GB, iCinnamon 5.0 enobunzima be-2 GB kunye neXfce 4.16 enobunzima be-1.9 GB.
I-Linux Mint 20 ihlelwe njengeNkxaso yeXesha elide (i-LTS), kunye nohlaziyo lokukhupha kude kube ngu-2025.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Inguqulelo entsha yeLinux Mint 20.2 sele ikhutshiwe
I-kernel ayizange ihlaziywe, inyani kukuba bendilindele ngakumbi kule nguqulo
Eyona nto ifanayo kunye nokunye okufanayo, izinto ezininzi ezingenamsebenzi, eziguqulela kwi-distro ephinda ivuselelwe kwaye iqhubeke ngokukhawuleza. Uyayifaka kwaye unexesha elihle lokukhupha phantse isiqingatha se-distro. I-Mint ayisiyiyo le nto yayiqhele ukuba yiyo, endaweni yokusebenza ngakumbi nangakumbi, ukusebenza kunye ne-kernel ehlaziyiweyo, yinto eyahlukileyo, ndiyiphinda ndiyilayishe ngakumbi nangakumbi kwaye ke kubonakala ngathi ndenza into. Okwangoku i-xubuntu inika iwaka elijika kwi-Mint.
I-KDE ilungiselela ukulungiswa kwamaninzi ePlasma 5.23, uninzi lwazo lweWayland
I-KDE Gear 21.04.3 ilapha kunye nokugqibela kokuchukumisa kunye nokulungiselela ukufika kwezinto ezintsha ngo-Agasti